Pakistan :Mangataka Ny Hanokafana Ny Youtube Ny Fitsarana Ambony · Global Voices teny Malagasy
Pakistan :Mangataka Ny Hanokafana Ny Youtube Ny Fitsarana Ambony
Nandika (fr) i Joseph Rendu
Voadika ny 04 Jona 2014 20:38 GMT
Ho setrin'ny fitoriana napetraky ny fikambanana tsy miankina (ONG) Pakistaney Bytes for All, namoaka didy ny Fitsarana Ambony tamin'ny 13 mey fa tsy maintsy sokafana ny Youtube ao Pakistan. 20 volana taorian'ny fanakatonan'ny governemanta ny habaka no nilatsaka izany didim-pitsarana izany. Nakatona tanteraka ny Youtube tao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny Septambra 2012, noho ilay horonantsari-mihetsika mitohy nahabe-resaka “Hatsorampon'ny Miozolomana”. Efa nakaton'ny governemanta Pakistaney ny Youtube taloha tamin'ny taona 2012 sy 2011 ihany koa.
“Dingana lehibe hoan'ny hetsika manerantany miaro ny zo nomerika ity didim-pitsarana androany ity” hoy ny talen'ny fikambanana Bytes for all ao amin'ny firenena, Shahzad Ahmad. «Ny fanasivanana sy ny fanarahamaso ny aterineto dia midika ho fanarahamaso ny fahalalaham-pitenena sy ny fahalalahana mivory na manao fihetsiketsehana. Asehon'ny didim-pitsarana fa tsy maintsy miasa miaraka ho amin'ny fisokafan'ny aterineto ireo fikambanana tsy miankina».
Tsy midika ny didy navoakan'ny Fitsarana ambony fa azo idirana avy hatrany ny YouTube. Nakatona ny Youtube taorian'ny baikon'ny Fitsarana Tampony tamin'ny taona 2012, izay nilaza fa tokony hofafana ao amin'ny Youtube ilay horonantsari-mihetsika «Hatsoram-pon'ny Miozolomana » ary tsy azon'ny olona jerena intsony rahatrizay. Misy ireo vondrona manam-pahaizana, ahitana solontena avy ao amin'ny Minisiteran'ny teknolojia vaovao mbamin'ny avy ao amin'ny Bytes for All, izay nanontanian'ny Fitsarana ambony amin'ny resaka ara-teknika mifandraika amin'izay mety ho famahana ny YouTube, nanoro hevitra fa tsara kokoa ny mametraka hafatra fampitandremana fa tsy manakatona ny habaka iray manontolo. Nahita ihany koa ny Fitsarana Ambony fa efa ampy ny fametrahana hafatra fampitandremana, saingy tsy afaka manao na inona na inona izy ireo raha tsy manaisotra ilay didiny teo aloha ny Fitsarana Tampony. Tokony hangataka fanazavana mikasika izany didy izany ny Bytes for All amin'izao fotoana izao. Afaka manome izany ny Fitsarana Tampony, rehefa tafaverina ao amin'ny Fitsarana ambony ny raharaha ary azo atao ny manome didy amin'ny fanokafana ny Youtube avy eo, na afaka manome didy amin'ny fanokafana indray ihany koa ny Fitsarana Tampony.
Namoaka ny didiny ny Fitsarana Ambony nandritra ny fotoana nametrahan'ny Bytes for All fitoriana momba ny tsy fanajana lalàmpanorenana tamin'ny volana Janoary 2013, ary miampanga ny flalan-dririnina mahazatra ny governemanta Pakistaney amin'ny fanakatonana habaka araka izay mahadiavolana ny sainy. Ankoatra ny YouTube, dia tafiditra anaty lisitra mainty ny habaka tahaka ny Toronto Sun, Rolling Stone, BuzzFeed.com, sy ny hafa maro ary tsy azo nidirana intsony ao Pakistan ary tahaka izany ihany koa ny pejy maro ao amin'ny Wikipedia. Raha nolazaina fa noho ny fitandroana ny soatoavina ara-pitondrantena no anton'izany fanakatonana izany, mampiseho kosa ny fikarohana momba ny fanasivanana ao Pakistana fa mety ho antony ara-politika no tena mahatonga ny fanakatonana.
Fanitsakitsahana ny andraikitr'i Pakistan eo amin'ny sehatra iraisampirenena tokony hiantoka ny fivezivezena an-kahalalahan'ny vaovao, indrindra fa ireo miresaka politika, ny fifehezana ny fidirana amin'ireo loharanom-baovao hafa mahazatra ny olona. Manitsakitsaka ny Lalàmpanorenana Pakistaney ihany koa izany. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fahazoana loharanom-baovao ireo habaka tahaka ny Youtube, ny Twitter ary ny Facebook: toy ny fantsona fizaram-baovao hoan'ny daholobe, mety ho tsy tratran'ny fampahalalam-baovao mahazatra, izany loharanom-baovao izany.
Dingana lehibe amin'ny tolona hoan'ny aterineto misokatra ho an'ny daholobe ao Pakistan ity didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Ambony ity. Na dia izany aza, mbola maro ny asa miandry, hoy i Yasser Latif Hamdani, izay misolo tena ny Bytes for All amin'ny hetsika fanangonan-tsonia. “Midika izany didy izany fa mila mitaky fanazavana bebe kokoa avy amin'ny Fitsarana Tampony mikasika ilay didy vonjimaika navoakany izahay” hoy i Hamdani. “Ho any amin'ny Fitsarana Tampony izahay ary hitaky izany fanazavana izany. Hamerina izay hitsarana indray ity raharaha ity izahay mba tsy ho voaràra intsony ny YouTube. »
Izahay ato amin'ny MLDI dia hanohy hanohana sy hiara-hiasa amin'ny Bytes for All sy ny ekipa mpisolovavany mba hamahana ity olana ity sy hanokatra ny Youtube ao Pakistan ho azo hidirana indray.
30 Marsa 2021Azia Atsimo